Maxaa R/W Saaciid loogu diiday la kullanka wufuuda caalamiga ah? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa R/W Saaciid loogu diiday la kullanka wufuuda caalamiga ah?
Maxaa R/W Saaciid loogu diiday la kullanka wufuuda caalamiga ah?
Waxaa laga yaabaa inaysan dad badan ku baraarugsaneyn, hase yeeshee waxaa aad iyo aad u yar, haddiiba aysan jirin in ra’iisul wasaare Saacid uu ka qeyb galo kullamada Dowladda ay la yeelneyso madaxda iyo wufuuda caalamiga ah ee booqata Muqdisho.
Muqdisho waxaa toddobaad kasta booqda 3 illaa 5 wafti oo heerarkoodu kala sareeyo, waxaana gebigood la kulma madaxweyne Xasan Sheikh iyo lataliyeyaashiisa.
Inkasta oo Xasan Sheikh yahay madaxweynaha dalka, haddana waxaa siyaasadda dalka gacanta ku haya ra’iisul wasaaraha, maadama uu isaga hogaamiyo xukuumadda, waxaana ay ahayd inuu la socdo waxa dalka ka dhacaya.
Ma cadda sababta aanu ra’iisul wasaaraha kaga qeyb gelin kullamada madaxda iyo wufuuda caalamiga ah, hase yeeshee waxaa loo maleynayaa inay qeyb ka tahay qorshe saameyntiisa lagu yareynayo.
Madaxweynaha iyo koxodiisa Damul Jadiid ayaa la rumeysan yahay inay si adag gacanta ugu dhigeen hogaanka Dowladda, ayna yareeyeen dhaq dhaqaaqyada ra’iisul wasaaraha, si ay si buuxda gacanta ugu hayaan siyaasadda dalka.
Dhinaca kale farshaxamiistaha caanka ah Amiin Caamir ayaa sawir gacmeed cajiib ah ka sameeyay arrintan.